HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 16-AUG-2020
Sunday August 16, 2020 - 09:23:25 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo oo uga warbixiyay Baarlamaanka JFS Wadahadalladii Dhuusamareeb Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad u jee diyey Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soo
Madaxweyne Farmaajo oo uga warbixiyay Baarlamaanka JFS Wadahadalladii Dhuusamareeb Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad u jee diyey Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay aa uga warbixiyay Shirka Wadatashiga Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed ee ku qabsoomay magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan wada hadallada ku saabsan ar rimaha doorashooyinka dalka. Madaxweynaha ayaa uga mahad-celiyey Guddoonka iyo Xildhibaannada sida ay uga ajii been qabsoomidda kulankan aan caadiga ah ayn, isaga oo muujiyey sida ay uga go'an tah ay in laga miro dhaliyo wadatashiyada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed oo salka ku haya heshiiskii siyaasadeed ee Baydhabo, kaas oo qeexaya qabsoomidda doorasho ku sale ysan hannaanka dimuqraadiyadda dham meystiran. "Horey ayuu u dhacay heshiis siyaasadeed oo ku saabsan hannaanka doorashooyinka dal ka, sanadkii 2018-kii Shirkii Baydhabo, kaddib markii guddi ka socda Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada ay muddo soo diya arinayeen, Shirarkii London iyo kii Brussels sidaas oo kale waxaa la isku raacay qabsoo midda doorasho qof iyo cod ah, halka aad idi nkuna ansixiseen sharcigii hagi lahaa doo rashadaas." Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa u xaq iijiyey Guddoonka iyo Xildhibaanada Baarla maanka Federaalka Soomaaliya in uu dib ugu soo celin doono heshiis walba oo lala gaaro Madaxda Dowlad Goboleedyada si ay kaalintooda dastuuriga ah uga gutaan. "Waxaa lagama maarmaan ah in Xukuuma dda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyaduba ay mar walba wada hadlaan, wada tashadaan, is qanciyaan, lana yimaaddaan qorsheyaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed ee aad idi nka matashaan, taas oo sii xoojinaysa in Go lahani uu noqdo marjicii arrimaha masiiriga ah ee dalka." Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farma ajo ayaa ku bogaadiyey Baarlamaanka 10-aad ee dalka shaqadii wanaagsanayd ee ay qab teen muddadii uu socday Kalfadhiga 7-aad iyo hawlaha baaxadda leh ee ay suurta galiyeen oo ay ugu horreeyaan Shuruucda hortabinta u leh dowlad dhisidda Soomaaliya sida Sharciga Doorashooyinka dalka. DHAMMAAD
Md.C/kariin Guuleed "Hadal jeedinta Mada xweyne Farmaajo waxaa ka muuqatay rajo beel”
Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ahna Guddoomiyaha Xisbiga Sahan ayaa sheegay in hadalkii Madaxweyne Fa rmaajo Shalay ka jeediyay kulankii Baarla maanka ay ka muuqatay rajo beel iyo in uusan dooneyn heshiis siyaasadeed uu la gaaro dhinacyada kale sida dowlad goboleedyada iyo Xisbiyada.
C/kariin Guuled ayaa sheegay in hadalka Madaxweynaha uu dhaawac ku yahay natiijadii shirkii Dhuusam areeb 2 iyo shirka soo socda ee Dhuusamareeb 3.
"Waxaa laga fahmi karay inu usan ugu socon Dhuusamareeb in heshiis la gaaro. Mad axweynuhu uma hadlin sida hogaa miye xal doon ah, waxna uma hambeyn raga uu rabo in uu kula shirko Dhuusamareeb”ayuu yiri C/k ariin Guuleed.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in Farma ajo uusan rabin in dalka doorasho ka dhacdo iyo inuu weli ku haminayo inuu helo muddo kor orsi, taasoo ah mid aan la aqbali karin, dalkana dhibaato u horseedi karta.
"Sida uu Shalay u hadlay madaxweynuhu, dib u dhigistiisa dhismaha xukuumadii fulin la aheyd arrimaha doorashooyinka iyo ballantiisii aheyd inuusan wax go’aan ah ku gaari doonin shirka Dhuusamareeb, waxey cabsi ku tahay dhamaadka mudo xilleedkiisa, waxeyna dhina cyada kale ku qasbi doontaa iney isugu yima adaan wadatashi ka madaxbanaan Dowladda Dhexe”ayuu yiri.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in Madax weyne Farmaajo looga fadhiyo labo arrin mid kood, oo kala ah:
1. Inuu ku adkeysto in isaga iyo hay’addaha Dowladda ee Xamar fadhiya ee waqtigoodu dhamaadka yahay iney yihiin cida iskaleh go’a ammada doorashada oo aaney cid kale waxba la wadaagin, taas oo salka ku heysa muddo kororsi.
2. Inuu si niyad sami ah uga qeybgalo shirka Dhuusamareeb 3, oo uu wada xaajood dhab ah la galo madaxda Dowlad Goballeedyada iyo xisbiyada mucaaradka ah si loo gaaro he shiis siyaasadeed oo dalka ku hogaamiya qa bsoomidda doorasho loo dhanyahay oo waqtigeedii ku dhacda.
Wixii intaas kasoo hara madaxweyn uhu wu xuu sameynaya ismiidaamin siyaasadeed wux uuna u baahan yahay in gacanta laga qabto, oo dalka la badbaadiyo.Xigasho:Jowhar.com
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xarig ga ka jaray xarumo cusub
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxam uud Maxamed (Cumar Filish) ayaa xariga kaja ray xaruma cusub oo laga hirgaliyay degmada Kaxda ee Gobolakan Banaaadir.
Cumar Filisha ayaa xarigga ka jaray laba xaruumod oo kala ah MCH-ka degmada Kaxda iyo Iskuul loogu talagalay in caruurta kunool degmada Kaxda si bilaash ah wax loogu baro. axaa guddoomiyaha iyo mas’uuliyiin ka tirsan Gobalka Banaadir lagu soo dhaweeyay degm ada Kaxda, iyadoo boqolaal shacab ah iyo maamulka degmada ay soo dhaweyeen Duqa Muqdisho, waxaana uu kormeeray xarumaha cusub ee dhawaan loogu shaqayn doono bul shada ku nool degmada oo baahi weyn u qabay MCH-ka iyo Iskuulka uu Shalay xariiga uu ka jaray Cumar Filish.
Guddoomihayaha ayaa dhagaystay baahiy aha gaar ka ah ee degmada haysta, waxana bulshada iyo maamulka degmada ay u sharr axen waxyaabaha ugu daran ee ay hadda u baahan yihiin, waddooyinka degmada, Cusbit aalada iyo Iskuuladka degmada ayay sheege en in ay yihhin baahiyaha ugu badan, waxaana Cumar Filish uu sheegay in ay wax ka qaban doonaan baahiyaha ay qaban bulshada ku nool degmada, balse waxaa uu sheegay in sida ay u kala daran yihiin loo kala hormarin doono.
Mas’uuliyiinta degmada Kaxda oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha degmada ayaa ka mahad celiyay goobahan cusub ee Shalay xariiga laga jaray.
Ugu dambeytii Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa sheegay in ay jiraan degmooyin badan oo ay dhawan mashruucyo hormarineed ay ka billaabi doonaan.
Farmaajo oo Madaxtooyada Galmudug kula kulmay 3 Madaxweyne maamul goboleed
MadaxweynahaJFS Md.Maxamed C/hi Far maajo ayaa gaaray M/Dhuusamareeb ee xaru nta Dowlad Goboleedka Galmudug.
Shirkan ayaa ku saabsan dhammeystirka wada-tashiga hannaanka geeddi socodka siya asadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka, iyadoo madaxdu ay ka arrinsanayaan qodobbada muhiimka u ah dowladnimadeenna oo ay ugu horreyso qabsoomidda doorasho waafaqsan dastuurka, kana turjumeysa himilada shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa Garoo nka Diyaaradaha M/Dhuusamareeb ee Ugaas Nuur ku soo dhaweeyay Mada xweynaha Gal mudug Md.Axmed Cabdi Kaariye, K/Xigeenk iisa Md.Cali Daahir Ciid, Madaxweyneynaha K/Galbeed Md. Cabdicasiis Xasan Maxamed, Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Md.Maxamed Nuur Gacal iyo Ku Xigeenna dii sa, Xubno ka tirsan Goleyaasha heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda maam uladaasi ayaa ku kulmay Xarunta Madaxtooya da maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay Dhuusamareeb waxa uu kulamo gaargaar ah la qaadan doonaa Mada xda Heer Dowlad Goboleed iyo bul shada qeybaheeda kala duwan.
Ciidanka Danab oo soo badbaadiyay Carruur ay heysteen Al-Shabaab
Taliska Ciidanka Xoogga dalka ayaa she egay inay soo badbaadiyeen illaa 33 carruur ah oo ay heysteen Al-Shabaab, kaddib how lgal ay Dorraad ka sameeyeen degmada Kun tuwaarey ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidanka Kumaandooska ee Danab ayaa Dorraad howlgal ku qaaday degmada Kunt uwaarey, waxaana Ciidamada si taxadar leh gudaha ugu galeen Kuntuwaarey oo muddo sanado ah Al-Shabaab heysteen.
Warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa soo bandhigtay sawirada Ciidanka Kumaando oska oo gudaha u galaya Kuntuwaarey iyo iy agoo carruur yar yar u qeybinaya buskud.
Carruurta ay Al-Shabaab heystaan ayaa la sheegay in waalidiintooda laga kaxeystay, wax aana lagu hayay xarun ku taallay degmada Kuntuwaarey.
Somaliland oo ka hadashay dagaal ka dhacay Gobolka Sool
Golaha Guurtida Somaliland ayaa ka had lay dagaal beeleedyo dhawaan ka dhacay Go bolka Sool, kuwaas oo u dhexeeyay Beelo wa laalo ah oo halkaas wada dega.
Guddoomiyaha Golaha Guurtida ayaa kulanka ku sugnaa waxana uu ka xog werays tay xubnaha Golaha guurtida ee ku howlanaa joojinta dagaal beeleedka, waxaana si gaar ah uu guddoomiyuhu kaga waraystay khaasaraha ka dhashay dagaalka iyo sida wax u dheceen.
Dagaalka dhexmaray beelaha walaalaha ah ee dega Gobolka Sool ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Jidbaale, waxaana Golaha Guurtida Soomaliland ay sheegen in dagaal kaas ay ku dhinteen 6 ruux halka ay ku dhaa wacmeen 8 kale.
Sidoo kale dagaal beleedka ayaa saameyn ku yeeshay sida ay Goluhu ay sheegeen gogol nabaded oo taalay degaanka Adhi-caddeeye ee Gobolka Sool, halkaasi oo ay ka socotay xalinta dagaal beleed ka dhacay dhawaan degaankaas.
Dagaalada u dhexeeya beelaha daga Sool ayaa tiro dhawr jeer ah soo noqnoqday, wa xana dagaalkii dhawaan ka dhacay jidbaale ka la dhexgalay Ciidamo ka tirsan Somaliland oo loo xilsaaray in ay dagaalkaas joojiyaan, si loo yareeyo khaasaaraha dhimashada iyo dhaa waca leh ee ka dhalanaya dagaal beleed kaas
Wasiir hore Juxa” Heshiis siyaasadeed boos ugama bannaana gole shacab oo waqtigoodii dhacay”
Cabdi Faarax Saciid Juxa Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu doonaayo in uu carqaladeeyo Shirka Dhuusamareeb uga furmi doona Madaxda maamulada iyo dowladda dhexe ee doorashooyinka.
Waxaa uu sheegay in heshii ska lagu gaaro Dhuusamar eeb aan dib loogu soo celin karin Golaha Shacabka oo uu sheegay in Waqtigoodii uu dhamaaday.
"Madaxweyne Farmajo wuxuu Golaha shacab ka ka horsheegay inuu wixii Dhuusamareeb la gu gaaro uu iyaga kusoo celinayo oo ay ere yga ugu dameeya ee doorashada iyagu leey ihiin. Tani marna maaha inay suurtogasho. "Wi xii Dhuusamareeb lagu gaaro waa inay ku ek aadaan Dhuusamareeb.” Heshiis siyaasadeed boos ugama bannaana gole shacab oo waq tigoodii dhacay” ayuu yiri Juxa.
Waxaa uu intaasi kusii daray”Doorasho dadban oo heshiis lagu yahay keli ah ayaa Shalay suurtogal ah. Golaha shacabku dib ha ugu noqdaan goboladooda oo kalsooni cusub ha weydiistaan.
Dowladda Soomaaliya oo dib usoo celisay maxaabiis ku xirnayd Tansaaniya
Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in ay Shalay Dalka dib ugu soo celiso17 mu waaddin oo midi ay tahay haween, kuwaas oo u badnaa maxaabiis laga soo daayay xabsiyo kuyaalla Tanzania.
Maamulaha hay’adda IOM u qaabbilsan illaalin ta iyo caawimaadda muh aajiriinta, Isaac Munyae ayaa sheegay in ay qor sheynayaan howlo gudaha Dalka Soomaali ya looga fidinayo muhaa jiriinta laga soo celiyo xabsiyada Caalamka.
Howlaha lagu daayay maxaabiista ayaa waxaa gacan ka geystay Ergayga gaarka ah ee xuquuqda Carruurta iyo tahriibayaasha ee Xafiiska Ra’isul Wasaaraha Dalka Amb assador, Maryan Yaasiin , Wasaradda arrim aha dibedda Soomaaliya, hay’adda IOM Soma lia iyo Tanzania iyo Safaraadda Somaaliyeed ee Dalka Tanzania.
Wasiirka arrimaha Dibedda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay munaasabadda loo sameeyay Dadka la soo celiyay ayaa uga mahadceliyay hay’adihii juhdiga iyo dedaalka ku bixiyay soocelinta Dadkan.
Wasiir Fiqi oo dhagax dhigay xabsi cusub
Wasiirka Amniga Gudaha Galmudug Md. Axmed M. FIQI iyo taliyaha ciidanka Booli ska Galmduug ayaa bo oqasho Shalayy ku tagay saldhigga caasimadda Dhusamareeb ayagoo u kuurgalay habsami u socodka hawlaha ciida mada Booliska.
Wasiirka iyo taliy aha ayaa dhagax dhi gay xabsi qaab iskuta shi ah looga hirgalinayo saldhigga caasimadda dhexdiisa, kaasoo ay dhismihiisa gacan ka geysan doonaan bulshada caasimadda, ciidam ada Booliska, wasaaradda amniga iyo Qurb ajoogta reer Galmudug.
Dawladda Galmudug ayaa siyaasad ahaan u qaadatay in saldhig walba laga hirga liyo xabsi lagu xiro kuwa danbiyada geysta iyo kuwa danbiyada kala duwan loo xukumo.
Wasiirka ayaa jaaliyadaha reer Galmudug iyo dadka caasimadda ugu baaqay In gacan ay ka geystaan dhismaha xabsigaas muhiimka u ah amniga iyo kala danbaynta Galmudug.
Gaari dad shacab ah u rarnaa oo la gubay
Wararka aan ka helayno Gobolka Shabee llaha hoose gaar ahaan degaanka Buulaloow oo 3km u jira degmada Afgooye ayaa sheegay in halkaasi lagu gubay gaari u rarnaa ganac sato Soomaaliyeed.
Goob joogayaal ayaa sheegay Gaariga oo ahaa nooca xammuulka qada ayna saarnayd dhuxul ay dab qabadsiiyeen dag aalamayaasha Al-sha baab, waxaana la she egay in dhammaan gaarigu uu bas belay.
Wararku waxa ay intaas ku darayaan in gaarigu uu kusoo jeeday Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Maamulka Gobolka shabellaha hoose iyo kan degmada Afgooye wali kama hadlin dhacd adaan, waxaana dadka degaanku ay sheeg ayaan in gaariga iyo dhuxusha saarnayd ay gubeen Al-shabaab.
Wasiir ka tirsanaa Puntland oo Garo owe ku geeriyooday
Wasiiru Dowlihii Madaxtooyada Puntland, Maxamed Xasan Ciise ayaa Shalay ku geeriy ooday Isbitaalka Qaranka, ee ku yaala Maga alada Garoowe ee Xarunta Maamulka Punt land.
Geerida Marxuumka, waxaa xaqiijisay Mad axtooyada Puntland, waxaana ka tacsiyeeyay Kusimaha Madaxweynaha ah na Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, Axmed Cilmi Cisma an (Axmed Karaash).
"Madaxweynuhu waxa uu Alle (SWC) uga baryey marxuumka inuu demb igiisa dhaafo, su’aasha qabriga u sakhiro, kuna abaal-mariyo Jannatul Fardawsa, samir iyo iimaanna ka siiyo shacabka Puntland iyo ehe lkiisiiba.” Ayuu yiri Axmed Karaash.
Marxuumka ayaa maalmihii u dambeeyay ku xanuunsanaa Garoowe, ka dib markii ay neefsashadu ku adkaatay, xilli isla Shalay la doonayay in loo soo qaado dhanka Magaa alada Muqdisho.
Xilka Wasiiru Dowlaha waxaa loo magicaa bay 21-kii October 2019, waxaana uu Xafiiska hayay muddo sagaal bilood iyo maalmo ah.
Shalay ayaa lagu wadaa marxuumka in lagu aaso Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobol ka.
Faah faahino ayaa kasoo baxaya Kooxo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa xalay Xaafad ka tirsan Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir ku dilay Wiil dhalinyaro ah oo gadayay Xarun Farmashiye.
Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Idaacad da Dalsan ayaa waxaa ay u sheegeen in dilk aas loo geystay Wiilka uu ka dhex-dhacay Fa rmashiga uu ku ganacsanayay oo ku yaalla Xaafada Afrikada ee Hodan, isagoo u geeriyo oday rasaas dhowr ah oo lagu dhuftay.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magic aabi jiray Faysal Maxamed Xuseen, iyadoona ragga hubeysan ee dilkiisa fuliyay ay isaga dhigeen dad doonayay ay kaniini ka iibsadaan, hayeeshee ay toogteen.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in Farma shiga lagu dilay Marxuum Faysal Maxamed uu lahaa Aabihiis Dr Maxamad Xuseen, waxaana halkaas si deg deg ah